“Real Madrid way awoodaa inay soo qabato kooxda Barcelona” – Ramos – Gool FM
“Real Madrid way awoodaa inay soo qabato kooxda Barcelona” – Ramos
(Real Madrid) 10 Feb 2019. Kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos ayaa xaqiijiyay in Real Madrid ay awood u leedahay in ay soo qabato hogaamiyaasha horyaalka La Liga ee Barcelona.
Ramos ayaa dhaliyay rigoore kulankii Madrid Derby ay xalay guusha kaga gaareen kooxda Atletico Madrid 3-1, kaasoo ka tirsanaa kulamada 23 ee horyaalka La Liga xili ciyaareedkan.
32 jirkan ayaa dhaliyay kulankii xalay goolkiisii 11-aad ee dhamaan tartamada kala duwan ee xili ciyaareedkan, taasoo ka dhigeysa inuu qaadanayo xili ciyareedkiisii ugu fiicnaa ee dhanka gooldhalinta.
Farqiga u dhaxeeya labada kooxood sida adag ugu dagaalama kubada cagta Real Madrid iyo Barcelona ee dhanka hogaanka horyaalka La Liga ayaa gaarsiisan ilaa iyo 5 dhibcood, kadib guushii ay Los Blancos ka gaartay kooxda Atletico Madrid, balse Barca ayaa dhankeeda caawa la ciyaari doonto Athletic Bilbao, waxaana suuragal ah in farqiga uu gaaro ilaa iyo 8 dhibcood.
Hadaba Ramos ayaa ciyaarta kadib wuxuu ka hadlay loolanka horyaalka La Liga wuxuuna yiri:
“Tartanka horyaalka La Liga wali waa mid taagan, waxaa jira dhibco badan iyo kulamo badan ee la ciyaari doono”.
“Koox kasta waxay awood u leedahay inay wax ka qabato caqabadaha hor taagan, sida aan ku soo aragnay wareega hore”.
“Waxaan leenahay rajo, waxaan u dagaalami doonaa horyaalka La Liga, waxaan xaalada ku adkeyn doonaa kooxda Barcelona, ​​ inkastoo ay leeyihiin wax aad u muhiim ah”.
“Real Madrid waxay ciyaartay kulan aad u fiican, iyadoo bixisay qaab ciyaareed ka dhameystiran dhinacyada kal duwan”.
Tababare Klopp oo ka hadlay hal xaalad aad u adag ay kooxdiisa la kulantay kahor kulankii Bournemouth